Burmese Poetry Foundation: February 2010
အနီရောင်စက်ဝိုင်းကနေ မစ်ကီးမောက်စ် ပုံပေါ်လာ
အပြာရောင်ဆီစိမ်စက္ကူပေါ် သင်္ဘောတစီး ပုံကြမ်းရေးခြစ်ထား
ကိုလံဘတ်စ် ရှာမတွေ့ခဲ့တဲ့ ကိုယ်ပျောက်ကျွန်းတွေဆီ
ပင်နယ်စလင် ရှာဖွေတွေ့ရှိပုံ အသုံးဝင်ပုံနဲ့ လူသားရဲ့ မပြီးဆုံးစတမ်း နောင်တတရားများ
အနမ်းနဲ့ အနမ်းအပေါ် တင်ဆက်မှု အနုပညာများရဲ့ လျှို့ဝှက်သည်းဖို အတွေ့အကြုံ
နောင်လာနောက်သားများ အပေါ် မချောမွေ့တဲ့ အသားယူလက်ဆင့်ကမ်းချန်ရစ်မှုတွေ
ယမ်းမှုန့်ကိုထောင်းထည့်ကာ မီးပေါက်မီးကူး ကောင်းအောင် ချိန်ညှိရတယ်
ဒိန်ခဲ ကိုမအောင်မမြင်ရွှေ့မိခဲ့ပုံ။ ။
gun and cheese
mickey mouse appears out of the red circle
the sketch ofaship drawn on blue tracing paper
towards invisible islands columbus hadn't discovered
the discovery of penicillen, its usefulness, and the never-ending
regrets of humans
the mysterious experiences ofakiss and its art of presentation
the non-smooth handing down to next generations
pounding gun-powder needs adjustment to get sparks all right
the way the cheese is moved without success
ဂျာမန်လက်ရွေးစင် ဘောသမား ပိုဒေါ့စကီးရဲ့နှလုံးသားဟာ ပိုလန်တစ်ခြမ်း ဂျာမန်တစ်ခြမ်းဆိုပဲ
မြန်မာတစ်ခြမ်း ဟိုဟာတစ်ခြမ်းတော့ ကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူး
ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုယ် လုံးလုံးလျားလျားကြီး ချစ်ချင်တယ်။
ဗြောင်ကျရင် ရိုင်းတယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ ဟုတ်မှာပဲ
ဘာသာစကားဟာ ဖော်ပြဖို့ထက် ဖုံးကွယ်ဖို့များ ပိုပြီးသုံးနေကြတာပဲ
သံတမန်အဆက်အသွယ်လုပ်ရာမှာ သုံးတဲ့စကားတွေကို ကြည့်ပါလား
ညာတာကိုပဲ ယဉ်ကျေးတယ်လို့ ခေါ်နေကြတာပဲ . . .
မန္တလေး ဒေါက်တာအောင်ကြီးက မကောင်းမှုမှာ အလယ်လမ်းမရှိ၊ ဘုရားဟောမဇ္စျိမပဋိပဒါကို
ဥက္ကဋ္ဌတင်မြှောက်လိုက တင်မြှောက်၊ မတင်မြှောက်လိုက နေ . . .
ယနေ့ဖြူသည်ထင်၍ ဖြူသည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည့်ကိစ္စတစ်ရပ်ကို
ပြန်လည်ဆင်ခြင်သုံးသပ်သည့်အခါ အမည်းဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရလျှင်
အမည်းဟု ပြင်ဆင်ပြောဆိုရမည်သာဖြစ်သည်၊ အမည်းမှန်းသိလျက်
မိမိက အဖြူဟုပြောဆိုခဲ့ဖူး၍ မိမိစကားမပျက်စေလိုသဖြင့်
အဖြူဟု ဇွတ်မှိတ်မငြင်းလို . . .။
(က) အလိုကြီးခြင်း (ငြိ)
(ခ) အလိုမကျဒေါသ (ငြိ)
(ဂ) တွေဝေမိန်းမောခြင်း (ငြိ)
(ဃ) ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဟုတ်လှပြီထင်ခြင်း (ငြိ)
(င) အရာရာကို မှားယွင်းစွာမြင်ခြင်း (အဲဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူး)
(စ) ပစိပစပ်များခြင်း (မိန်းမကိုရန်ရှာတတ်-ငြိ)
(ဆ) လေးလံထိုင်းမှိုင်းခြင်း (ငြိ)
(ဇ) ပျံ့လွင့်ငေးမောခြင်း (ကဗျာဆရာလေဗျာ-ငြိ)
(ဈ) အကုသိုလ်ပြုရမှာမရှက်ခြင်း (ရှက်ပါတယ်)
(ည) အကုသိုလ်ပြုရမှာမကြောက်ခြင်း (ကြောက်ပါတယ်)
သားလုပ်တဲ့သူ (၂၉)နှစ်ကို ညတိုင်း စောင်ထခြုံပေးတယ်လို့ ကျွန်တော်ပြောတော့
သူငယ်ချင်းလုပ်တဲ့သူက “မင်းလိုကောင်မျိုး ဘယ်တော့မှ တရားအားထုတ်လို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး”လို့ ဂုဏ်ပြုတယ်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် . . . အသည်းနှလုံးပြည့်ပြည့်၀၀တစ်ခုလုံးနဲ့
ခင်ခင်ညို့ကို ကျွန်တော်ချစ်နေတုန်းပဲ . . .။ ။
(ဖက်ရှင်၊ ၂၀၀၉၊ သြဂုတ်)
တစ်ယောက်ကအဖြူဆို တစ်ယောက် အမည်း
တစ်ယောက်က အ၀ိုင်းဆို တစ်ယောက်က လေးထောင့်
သင့် “ဘာသာစကား”ကကော ဘာတွေလဲ။
ခင်ဗျားဟာ ယောနိသော မနသိကာရနဲ့
ဟဲဟဲ . . .ဟဲဟဲ . . .
ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ ညာဉ်ကလေးတွေဟာ
ဟုတ်ပ . . . ကျုပ်တို့အလုပ်က
နားရွက်ထဲ ဂွမ်းဆို့ထားလို့လည်း ရသေးတယ်လေ။ ။
ဖက်ရှင်၊ ၂၀၀၉၊ သြဂုတ်
ခင်ဗျားဟာ ခင်ဗျားဘ၀ရဲ့၁/၃ကို အိပ်ရာထဲမှာဖြုန်းခဲ့တာ
အိပ်ရာခင်းဟာ အရေးကြီးတယ်လို့ ခင်ဗျားတွေးဖူးလား
လူတစ်ယောက်ဟာ ဘ၀ရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံကို အိပ်ရာထဲမှာ ဖြုန်းရ/သုံးရ/အားဖြည့်ရတာ
အိပ်ရာခင်းဟာ အရေးကြီးတယ်လို့ တွေးဖူးလား? ? ? ?
(အင်တာဗျူးဟာ ကဗျာထဲကို မဆီမဆိုင်ဝင်ရောက်လာခဲ့။ ဖြေလို့ရရင် ဖြေနိုင်တယ်)
ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရ ‘ရင်ကြပ်’ ‘စိတ်ကြပ်’ ရောဂါသည်များ
ရာသီဥတုကြောင့်ဆိုရင် အိပ်ရာခင်းဟာ အရေးကြီးတယ်။
အိပ်ရာခင်းဝယ်ရာမှ အရေးကြီးတဲ့အချက်များကို အိပ်ရာခင်းစိတ်ဝင်စားသူ john က ဒီလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။
၃။ အိပ်ရာခင်းရဲ့ အထူ/အပါး (တချို့က ထူထူကြိုက်/တချို့ကပါးပါးကြိုက်)
၄။ ရာသီဥတုနဲ့ ရင်ကြပ်ရောဂါ
၅။ အိပ်ရာခင်းရဲ့ အသားအထူအပါးနဲ့ ရာသီဥတုဓာတ်
၆။ နေ့အပူချိန်နဲ့ ညအပူချိန်
၉။ အိပ်ရာခင်းအဖုအထစ်ကင်းစင်မှု၊ ချိုင့်ဝင်မှုအနေအထား
ရှိတ်စပီးယားရဲ့ Macbeth ပြဇာတ်မှာ ဇာတ်ကောင်တစ်ကောင်က ဒီလိုအော်ခဲ့ပါတယ်။
“Sleep, Sleep, Sleep, . . . . . .”
အိပ်ခြင်းရဲ့အရေးကြီးပုံ ကျွန်တော်တို့လူ့ဘ၀ရဲ့ ၁/၃ကို အိပ်ရာထဲမှာ ဖြုန်းပစ်ကြတယ်
အိပ်ရာခင်း<---------> ရင်ကြပ်ရောဂါ <---------> အိပ်မက်
အိပ်ရာခင်း၊ အိပ်မက်၊ ရင်ကြပ်ရောဂါနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘ၀စိတ်ကျပ်ကျပ်ထဲမှာ
အိပ်ရာခင်းဟာ အရေးကြီးတယ်လို့ ဘ၀ရဲ့ ၁/၃ က ထင်ပါသလား။ အင်တာဗျူးစပြီ။
ပိုက်ဆံရှာခြင်း ယဉ်ကျေးမှုပြ ပန်းပု (၁)
အာရုံခံစားမှု အားနည်းတယ်ပဲပြောပြော သမိုင်းမရှိဘူးပဲ ပြောပြော
ကြေးအိုးထဲမှာ အသားနည်းလာတယ် ပေါက်စီတွေသေးလာတယ်
အမျိုးသမီးရင်သားထွားဆေးတွေ ခွဲစိတ်ထည့်သွင်းမှုတွေ ခေတ်စားလာတယ်
မန်ယူပွဲဦးထွက်ညံ့တယ် မောင်ပြည့်မင်းနဲ့အောင်ပြည့်စုံ ‘တယောက်ချင်း’ ထွက်တယ်
လုံးချောဟာ ရန်ကြီးအောင်ကို ၅ ချီမှာနိုင်တယ် ဧရာဝတီမှာဆန်ဈေးကျတယ်
အဆင့်မြင့်အနုပညာနဲ့ လူပြိန်းကြိုက်အနုပညာ စည်းပြိုကွဲလာတယ်
ပါးစပ်ဖျားမှာ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း သဉ္စာဝင့်ကျော် စိုးပြည့်သဇင် ဗီတာမင်တွေ
အများကြိုက် ယဉ်ကျေးမှုဟာ တက္ကသိုလ်တွေမှာ သိက္ခာရှိလာတယ်
မိုးဟေကိုမှာ အောင်ပွဲတွေ ဇယားချထားတဲ့အတိုင်း တန်းစီနေတယ်
ကယ်လ်ဆမ်ကွေကာ ကြော်ငြာရဲ့ ဗလကြီးပုံထဲမှာ အရိုးတွေပေါ်နေတယ်
ဆူပါမင်းနဲ့ ဂျိမ်းစဘွန်းမှာ အားနည်းချက်တွေရှိပေမယ့် အမှန်တရားက အနိုင်ရတယ်
‘မြန်မာ နိုင်ပြီ၊ ဒို့ မြန်မာ နိုင်ပြီ’ ဟာ သွေးထဲမှာ လျှပ်စစ်ဓါတ်တဖြန်းဖြန်း
ဘာအာရုံခံစားမှုမှ မရှိဘူး ဘာသမိုင်းမှ မရှိဘူး ဘာ ဘ၀မှ မရှိဘူးပဲ ပြောပြော
တစ္ဆေတစ်ကောင်လို နေ့စဉ်တွေ့ကြုံသိရှိဝေဖန်ပိုင်းခြား သင်ယူဖြတ်သန်းမှုပဲရှိတယ်
အဲဒါနဲ့ ပြည့်စုံလုံလောက်တယ်ဆိုတာ လမ်းပေါ်က အခြားလူတွေလိုပဲ
ဦးလည်မသုံ စွဲမြဲယုံကြည်စွာ နှလုံးသွင်းလက်ခံထားရှိတယ်
ဘာစားမလဲ ဘာသောက်မလဲ ကိုယ့်ဖာသာမှာစား ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ရှင်း
အချင်းချင်းပဲ အိုက်ဒီယော်တွေ ဖီလော်တွေနဲ့ လာပိန်းမနေနဲ့
အမှောင်ထဲမှာ လင်းအောင်နေ (ပိုးစုန်းကြူးလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်)
ကြောင်မှန်ရင် အခင်းသွားပြီးပြန်ဖုံးတယ်( အဲဒါအသံငဲ့လိုက်တာ)
ဒါမှမသိရင် ခေတ်ကို ဘယ်လိုထင်ဟပ်မလဲ ဆုတွေ ဘယ်လိုမျှော်မှန်းမလဲ
ဒီစာမျက်နှာကို ၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈၊ ၆း၃၅ မှာ ပြုပြင်ထားပါတယ်
ဒါနဲ့ သင်တန်းတွေ ဘာတွေကော ဆင်းပြီးပြီလား ခေတ်မီစွာ မွမ်းမံနည်း
အလန်ကင်းန်စ်ဘာ့ဂ်(ဘယ်က အလန်ဂင်းန်စ်ဘာ့ဂ်လဲ) ကပြောတယ်
‘ကဗျာဟာ ပွင့်လင်းမှု တစ်ခုခုနဲ့ အဆုံးသတ်ရမယ်’
အဲဒါ သူ့ကဗျာသူပြောတာ လူတိုင်းဟာ အလန်ဂင်းန်စဘာ့ဂ်မဟုတ်ဘူး
ဘေဂျင်းကဗျာအိုလံပစ်မှာလည်း ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ စိတ်မကူးဘူး
ယောက်ျားတိုင်းဟာ သူ့ရဲ့ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ ကြီးထွားချင်ကြတာပဲ
ငါကတော့ ငါ့ဆိုက်ကားဘီး လေအပြည့်ရှိဖို့နဲ့
ရွာက ငါ့အဘလယ်မှာ စပါးအထွက်ကောင်းပြီး ဈေးကောင်းရဖို့ပဲ
နွေရာသီမှာ အဆင်ပြေရင် ရွာပြန်ပြီး သားကို ရှင်ပြုပေးဦးမယ်
မြွေကိုက်ပါတယ်ဆိုမှ ဘယ်ဗေဒကို တစ်ပါတည်းဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာလဲဟ ။ ။